Ukulondolozwa Kwezindaba ZaseVulcanizing
I-Conveyor Belt Joint Vulcanizers
I-Lightweight Belt Joint Vulcanizers
I-PVC PU Belt Joint Vulcanizers
Amathuluzi Wamathuluzi Esondlo
Njengethuluzi elihlangene lebhande lokuhambisa, i-vulcanizer kufanele igcinwe ngendlela efanayo namanye amathuluzi ngesikhathi nangemva kokusetshenziswa ukunweba impilo yenkonzo yayo. Njengamanje, umshini wokuqhafaza okhiqizwe inkampani yethu unempilo yokusebenza iminyaka engaphezu kwengu-10 inqobo nje uma usetshenziswa kahle futhi ugcinwa kahle.
Izinkinga ezilandelayo kufanele zinakwe lapho kugcinwa i-vulcanizer:
1. Indawo okugcinwa kuyo i-vulcanizer kufanele igcinwe yomile futhi ingenisa umoya kahle ukugwema amasekethe kagesi manzi ngenxa yomswakama;
2. Ungayisebenzisi i-vulcanizer ngaphandle ngezinsuku zemvula ukuvimbela amanzi ukuthi angene ebhokisini lokulawula ugesi kanye nepuleti lokushisa;
3. Uma indawo yokusebenza inomswakama futhi inamanzi, lapho uqaqa futhi uhambisa umshini wokuqhafaza, sebenzisa izinto phansi ukuwukhulisa, futhi ungavumeli umshini wokuqhafaza uthinte ngqo amanzi;
4. Uma amanzi engena kupuleti lokushisa ngenxa yokusebenza okungafanele ngesikhathi sokusetshenziswa, sicela uthinte umenzi ukuze alungiswe kuqala. Uma kudingeka ukulungiswa kwesimo esiphuthumayo, ungavula ikhava yepuleti yokushisa, uthele amanzi kuqala, bese usetha ibhokisi lokulawula ugesi ukuze usebenze mathupha, ulifudumeze libe ngu-100 it, uligcine lishisa njalo isigamu sehora, lome umugqa, bese unamathisela ibhande endaweni yesandla. Ngasikhathi sinye, umenzi kufanele athintwe ngesikhathi sokushintshwa ngokuphelele kwesifunda.
5.Uma i-vulcanizer ingadingi ukuthi isetshenziswe isikhathi eside, ipuleti lokushisa kufanele lifudunyezwe njalo ngenyanga yesigamu (izinga lokushisa lisethwe ku-100 ° C), futhi izinga lokushisa kufanele ligcinwe cishe isigamu sehora.
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma intengo, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana kungakapheli amahora angama-24.